Translateapreliminary study on venture in Burmese
Results forapreliminary study on venture in... translation from English to Burmese
a preliminary study in china of combined lopinavir and ritonavir found no effect in people hospitalized for covid-19.
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပမာဏလေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ lopinavir နှင့် ritonavir ဆေးနှစ်မျိုးစပ်၍ သုံးစွဲခြင်းသည် covid-19 ဖြင့် ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသနေသည့် လူများတွင် မည်သည့်အစွမ်းမျှ မပြကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
စမ်းသပ်မှုခုနစ်ခုသည် ဟိုက်ဒရောက်ဇီကလိုရိုကွင်း သို့မဟုတ် ကလိုရိုကွင်းဖော့စဖိတ်ကို လေ့လာမှုလေးခုအပါအဝင် ငှက်ဖျားရောဂါကိုကုသရန် အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့် ဆေးဝါးများကို ပြန်လည်ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းအား အကဲဖြတ်နေလျှက်ရှိပါသည်။
လူအချို့တွင် အဆိုပါ ဆေးဝါးများနှင့် ဓာတ်မတည့်မှုများ ရှိသည်။ ဧပြီလ 12 ရက်နေ့တွင် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံရှိ ဆေးရုံတစ်ခု၌ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကနဦး ဆေဝါးစမ်းသပ်မှုတွင် လူအများအပြားအား covid-19 ရောဂါကူးစက်မှုအတွက် ကလိုရိုကွင်း ဆေးအမြောက်အများ တိုက်ခဲ့ပြီးနောက် မူမမှန်သော နှလုံးခုန်နှုန်းများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး လူ 11 ဦး သေဆုံးခဲ့သောကြောင့် စမ်းသပ်မှုကို ရပ်တန့်ခဲ့သည်။
since then, more knowledge was accumulated through extensive studies on hcov-229e and hcov-oc43, both of which cause self-limiting symptoms.
ထိုအချိန်မှစ၍ ကန့်သတ်ထားသောရောဂါလက္ခဏာများကိုဖြစ်စေနိုင်သည့် hcov-229e နှင့် hcov-oc43 နှစ်မျိုးစလုံးပေါ်တွင် ကျယ်ပြန့်စွာလေ့လာမှုများမှတဆင့် အသိပညာများပို၍ရရှိလာပါသည်။
thus, we can only refer to previous studies on other covs, especially sars-cov and mers-cov (fig. ​(fig.4).4).
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အခြား cov များ၊ အထူးသဖြင့် sars-cov နှင့် mers-cov (ပုံ။ (ပုံ 4) .4) နှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်လေ့လာမှုများကိုသာ ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။
2020 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ 11 ရက်နေ့တွင် covid-19 အတည်ပြုလူနာ 4,021 ဦးပါဝင်သည့် လူနာ 8,866 ဦးဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သော စင်တာပေါင်းစုံ လေ့လာမှုအရ ကူးစက်ရောဂါအကြောင်း နောက်ဆုံးရအချက်အလက် အပြည့်အစုံကို အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ (https://mp.weixin.qq.com/s/ulbi-hx_rhpxa1qha2bhda)
natural resources essay in kannada (English>Kannada)如果在新法下仍然延续驱散策略 (Chinese (Simplified)>Malay)iberica (Spanish>English)šuplík (Czech>Portuguese)الحجر (Arabic>Amharic)潘基文秘书长强调 (Chinese (Simplified)>Malay)mundavit (Latin>Albanian)geostrategische (Dutch>Greek)aapki bahut yaad aa rahi hai (Hindi>English)republika batas 7192 tagalog version (English>Tagalog)الشرقية (Arabic>Spanish)equium (Latin>English)上の大部屋だ (Japanese>English)komponen laporan (Malay>Arabic)nahiya lang ako sayo (English>Tagalog)λιμένων (Greek>English)translate google com kaise ho (English>Hindi)infiltráty (Slovak>English)oskarżonym (Polish>English)前行 (Chinese (Simplified)>Korean)draw lots (English>Tagalog)setenta mil ochocientos tres (Spanish>English)malungkot ako dahil wala ka (Tagalog>English)hindi mag abot (Tagalog>English)marvell (German>English)